Zvitsauko 40-66 zvaIsaya zvinoita sepfupiso yeTestamente Itsva, chikamu 1
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Zvitsauko 40-66 zvaIsaya zvinoita sepfupiso yeTestamente Itsva, chikamu 1
Zvitsauko 40-66 zvaIsaya zvinoita sepfupiso yeTestamente Itsva, chikamu 1
Mune mabhuku 66 mubhaibheri. Mune zvitsauko 66 muBhuku raIsaya. Saka Isaya rinoita serinomiririra Bhaibheri rese.
Ngatitarisei muganhu uri pakati peTestamente Yekare neTestamente Itsva.
Mune maBhuku 39 muTestamente Yekare, saka Mateo iBhuku rechi 40 muBhaibheri rinotanga maBhuku eTestamente Itsva.
Ngatienzanisei Bhuku raMateo Bhuku rechi 40 muBhaibheri, naIsaya Chitsauko 40.
Bhuku rechi 40: Mateo
Bhuku raMateo rinotanga nemazwi akabva pachiporofita chiri kuna Isaya chitsauko 40.
Mateo 3:1 Namazuva iwayo Johane Mubhabhatidzi wakavuya achiparidza parenje reJudea,
2 Achiti, tendevukai nokuti vushe hwokudenga hwaswedera pedo.
3 Nokuti uyu ndiwakarebwa nomuporofita Isaya achiti: Izwi rounodana murenje, Gadzirai nzira yaShe, ruramisai migwagwa yake.
(Esaias ndiko kupereterwa kwechigiriki kwezita rekuti Isaiah.)
MuchiHeberu vaidaidza Mwari kuti Yahweh vachidunhurira zita iri vachiti Yah. Saka vaifarira kuwedzera mabhii ekuti ah pamazita avo sekuti Elijah.
ISAYA 40:3 Inzwi rounodanidzira, achiti, Gadzirirai murenje nzira yaJehovha, ruramisirai Mwari wedu mugwagwa musango.
Chiporofita chimwechete ichi chinodzokororwa kuna Mateo. Izvi zvakanyatsofanana zvekuti hapana kukanganisa kungave kwakaitika.
Jesu paakauya panyika, kuzara kwovuMwari chakava chinhu chainetsa vanhu kuti vachinzwisise.
MaJuda eTestamente Yekare vaiona Mwari wemasimba ose saMwari Baba, sezvo aive Mweya. Asi zvino paakauya akava Munhu, Jesu, aidaidzwa kuti Mwanakomana waMwari.
Mutestamente yekare hunhu hwaMwari hwaivonekwa mukati mekuita kweMweya wake unoshamisa.
MuTestamente Itsva, Mwari Baba vakaratidzwa muMunhu Jesu.
Saka Mateo akazivisa Mwanakomana wemhandara saEmanuere, Mwari anesu.
MATEO 1:23 Tarirai mhandara ichava nemimba, Ichazvara mwanakomana, vachamutumidza zita rinonzi Emanuere, ndokuti kana zvichishandurwa Mwari unesu.
Mateo akangodzokorora zvakaporofitwa naIsaya kare. Asi izvi hazvigoneke. Mhandara ingaite sei mwanakomana?
ISAYA 7:14 Naizvozvo Ishe amene achakupai chiratidzo, Tarirai mhandara ichava napamuviri, ichabereka Mwanakomana, achamutumidza Emanuere.
Mwari anokwanisa kuita zvinhu zvatinoti hazvigoneke. Mwari akava muduku kwazvo zvekuti akazviputira nesero raive ragutswa mukati medumbu raMaria. Sero remunhu rekutanga iri raive Mwanakomana waMwari. Mwari ndiye airarama musero iroro.
VAHEBERU 2:16 …. asi wakazvitorera vana vaAbrahama
Mbeu yemunhu ihafu yesero remunhurume rinobatana nehafu yesero rezai remukadzi. Asi munyaya iyi Mwari ndiye akasika zvese mbeu nezai. Iyi yaive mbeu yekutenda kwaAbrahama yakabatanidzwa nekutenda kwaMaria kuti iburitse Mwanakomana wesungano.
VAHEBERU 10:5 … asi makandigadzirira muviri:
Mwari akabva asika sero remuviri muduku uyu nerimwe sero. Maria aingove mutakuri chete. Hapana chikamu chemuviri waMaria chakashandiswa kugadzira Mwana. Asi nguva yese Mweya waMwari waive wakavigwa mukati meMwana aikura uyu.
ISAYA 45:15 Zvirokwazvo, muri Mwari anovanda, imi Mwari waIsraeri, Muponesi.
Mwari akavanzwa mukati memwana ari kukura mudumbu. Hakuna angatarisira izvi, kana kuzvitenda. Kunyangwe Dhiyabhorosi akaitwa rema ipapo.
Chiitiko ichi hachingagonekwe nemunhu. Asi Mwari anoita zvisingagoneki.
Asi Mwana uyu ndiye zvakare Mwari Baba, nekuti Mweya unorarama nekusingaperi waBaba unorarama mukati meMwana.
ISAIAH 9:6 Nokuti takazvarirwa Mwana, takapiwa Mwanakomana, umambo huchava papfudzi rake; zita rake richanzi, anoshamisa, Gota, Mwari ane simba, Baba vokusingaperi, Muchinda worugare.
Mwari vasina muganhu vakagona kuita zvisingagoneki nekuzviputira mumuviri memunhu usina miganhu kwaari.
Kakava kekutanga kuti huMwari huziviswe nekuyanana nehunhu. Mwari neMunhu, zvinhu zviviri zvinopikisana, zvakabatana zvikafambidzana.
Izvi zvakafanana nechiedza chine hunhu hwemafungu (chinoenda mativi ese) uye sechinhu chakabatana (chinofamba chichienda rutivi rumwechete muchinguvana).
Simba remafungu rinofamba richienda mativi ese.
Simba rechinhu chakabatana (bara rekoku) rinoenda rutivi rumwechete.
Vesainzi vanoshanda sei nehunhu hwechiedza hunopikisana uhu?
Kana vakafunga pamusoro pechiedza sechinhu chinobatika, vanosiyana nehunhu hwacho hwemafungu.
Kana vakafunga nezvechiedza semafungu, vanosiyana nehunhu hwacho hwechinhu chinobatika.
Jesu akazvidaidza kuti Chiedza chenyika.
JOHANE 8:12 Zvino Jesu wakataura zve navo, akati: Ndini chiedza chenyika;
Saka kana mukafunga pamusoro paJesu seMunhu, musafunge nezvake saMwari panguva iyoyo.
Zvino kana Jesu akaita hunhu hwaMwari, musafunge nezvake seMunhu panguva iyoyo.
Saka Mateo akazivisa Jesu kumaJuda saMwari vachifamba vari mumuviri wemunhu. Mweya waMwari uri mukati Make ndiwo Mwari Baba. Muviri weMunhu wakatakura Mweya waMwari ndiwo Mwanakomana waMwari.
MaJuda emuTestamente yekare vanokwanisa kuona Mwari seMweya unoshamisa, asi kwete seMunhu achifamba pakati pevanhu.
Saka Isaya akatsanangura huMwari hwaJesu kukunda zvakaitwa neamwe maporofita ese. Aida kuzivisa munhu wese kuti Jehova wekuTestamente Yekare akazviputira mumuviri wemunhu wenyama, akava Jesu wekuTestamente Itsva.
Mwari Mweya, kwete nyama neropa. Saka munhu Jesu Mwanakomana waMwari, chisikwa. Asi mukati meMunhu uyu munogara kuzara kwovuMwari pamuviri. Mwari baba (Mweya usingavonekwe) unogara mukati memunhu Mwanakomana waMwari, Munhu Jesu.
ISAYA 40:18 Zvino mungafananidza Mwari naniko? Kana mungamuenzanisa nemufananidzo upiko?
Isaya akajekesa kuti hazvigoni kuti tibatanidze Munhu naMwari mumunhu umwechete. Sezvinei Jesu akakwanisa kuita chishamiso ichi chekubatanidza zvinhu zviviri zvinopesana.
Jesu Munhu uye Mwari. Izvi zvinonetsa kubatanidza.
Jesu paakafamba nechikepe ari pamusoro pemvura, fungai nezvake semunhu kwete saMwari. Musabvunza kuti nei Mwari achida chikepe.
Jesu paakafamba pamusoro pemvura, fungai nezvake saMwari kwete semunhu. Musabvunza kuti Munhu angamira sei pamusoro pemvura.
Zvisinei, zvinhu zvisingagoneke zvinopikisana izvi zvakabatanidzwa muna Jesu Kristu. Hakuna mumwe anozvikwanisa. Saka hakuna munhu angaenzaniswa naJesu Kristu.
MaKristu akakwanisa kuziva Jesu semunhu asi vakazotambudzika kuti vamuone saMwari wemasimba ose.
M akore akapoteredza 200 AD mudzidzi weRoman Catholic Tertullian akatanga kutora tsika dzechipegani chekuBabironi nemazano echigiriki eTiriniti inoti Mwari mumwechete muVanhu vatatu. Chitendero cheTiriniti chakabva chapararira kuIjipita nekuIndia.
Kuedza kuonesa Tiriniti yechiHindu yaBrahma, Vishnu naSiva.
Kana kuti Tiriniti yavo inoratidzika seizvi here?
Matambudziko makuru anosimuka patinoedza kuona chinhu ichi chevatatu muMumwe asi “Vatatu ndivo Mumwe”.
Vatatu Mumwe, mumwe muvatatu, Vanhu vatatu muhuMwari, munhu wechipiri muhuMwari, Baba neMwanakomana vamwechete, vatatu ava vakaenzana asi vakasiyana. Pfungwa dziri muhuchenjeri hwemaGiriki dzakaiswa nevadzidzi padambudziko reTiriniti, zvisinei kuti hapana chimwe chezvakataurwa izvi chakanyorwa muBhaibheri. Kusvika parinhasi Tiriniti chichiri chakavanzika. Tinonzwisisa chete kana tikaona mufananidzo wechimwe chinhu. Asi Tiriniti inoramba kuzivisa mufananidzo wakajeka wehuMwari.
VekuIjipita vakasarudza sarudzo yekutanga kuitira Tiriniti yavo, vanhu vatatu pachigaro chevushe chimwechete. Vaishandisa mavara ekutanga I H S pazvidzitiro zvepaaritari pavo kuti zvimiririre Isis, Horus naSeb.
Tsika iyi ichiri kutevedzerwa nemamwe masangano.
Isis ndiamai, Horus ndibaba naSeb ndiye mwanakomana mune imwe yeTiriniti yekuIjipita.
Asi matambudziko anoramba ari pakuedza kusungirira pfungwa yeTiriniti paBhaibheri.
“Mwari Baba”, zviri muMagwaro, asi Bhaibheri haritauri pamusoro “paMwari Mwanakomana” - asi pamusoro “peMwanakomana waMwari”. Dzidziso yeTiriniti haikwanisi kutsanangura zvese izvi, kana kutsanangura kuti nei “Mwari Mweya Mutsvene” asina kubvira ataurwa muMagwaro. Asi dzidziso yeTiriniti inotaura mitsara isimo muMagwaro yakaita seyekuti “Mwari Mwanakomana” uye “Mwari Mweya Mutsvene” nemufaro.
Mutestamente Itsva, pakanzuru yeNicene yemuna 325 AD, maKristu aikwanisa kuona Jesu seMunhu, Mwanakomana waMwari. Vaikwanisa zvakare kuona Jesu saMwari asi vachikakavara nekuva kwake Mwari Baba. Saka Mambo Constantine akaita Tiriniti yeVanhu vatatu saMwari mumwe, chitendero chakasimba chekereke yeRoman Catholic.
Mufananidzo uyu unoratidza dzidziso yeTiriniti yeRoman Catholic.
Onai korona yaPope ine zvidanho zvitatu iri pamusoro waMwari.
Asi maCahtolic akasiyana siyana anoona mufananidzo uyu nenzira dzakasiyana, vanoona Mweya Mutsvene senjiva.
Pane mimwe mifananidzo inoratidza Baba vakakura, vakabata mwana muduku Jesu pamakumbo pavo. Jesu akabatawo njiva pamakumbo pake.
Kuziva kuti kuzara kwevuMwari kuchave dambudziko mukati mekereke yevaHedeni, Isaya ari kutaura nezvekuzara kevuMwari muzvitsauko zvitanhatu zvinotevera kuti aedze kuita kuti maKristu arambe ari munzira.
ZVAKAZARURWA 1:1 Zvakazarurwa zvaJesu Kristu, ...
8 Ndini Arfa naOmega, wokutanga nowokupedzisira, ndizvo zvinoreva Ishe Mwari, uripo, wakanga aripo, nouchazovapo, wamasimba ose.
Bhuku 41: Evhangeri raMako.
Mako anotipa muenzaniso wekuzara kwevuMwari kunoonekwa.
Jesu anotaura nevadzidzi vaviri Jakobo naJohane vose vaida kuva vakakosha vachigara kurudyi nekuruboshwe kwaKe Kudenga.
Mako 10:40 Asi kugara kuruvoko rwangu rworudyi, kana kuruboshwe, handizini ndinopa, asi ndezvavakazvigadzirirwa izvo.
Asi kutaura kwekuti Jesu wakagara kurutivi rweruvoko rwerudyi rwaMwari kunoreva kuti hakuna anokwanisa kugara kuruboshwe kwake. Asi mumwe munhu ari kufanira kuzogara kuruboshwe kwake. Saka muono unoburitswa neTiriniti wakarasika.
Tiriniti kudenga nemaonerwo ainoitwa nevemasangano.
Asi uyu ndiwo mufananidzo watinopihwa naJesu. Pane chigaro chevushe chisina agerepo kumativi ake ese.
Saka chii chakaitika kuna Mwari Baba ari kuruvoko rwaJesu rweruboshwe, zvichibva pamaonero evanotevera Tiriniti?
MAKO 14:62 Jesu akati; Ndini. Nemi muchaona Mwanakomana womunhu agere kurudyi rwesimba, achivuya namakore okudenga.
Ruvoko rwerudyi rungori chiratidzo chinomiririra simba.
Mwari Mweya. Mweya hauna chimiro kana ruvoko rwerudyi.
MAKO 12:29 Inzwai vaIsraeri, Ishe Mwari wedu ndiye Ishe Mumwe chete.
Kungori naIshe mumwe chete. Ishe ndiye wekutanga nokuguma.
ISAYA 41:4 Ini JEHOVA, wokutanga nowokupedzisira.
ZVAKAZARURWA 1:11 Ndini Alfa naOmega wokutanga nowokupedzisira.
Saka Jesu akagara ari wokutanga. Haakwanisi kudzikisirwa kuti ave Munhu wechipiri pakuzara kwovuMwari.
Ruka Bhuku 42: Evhangeri raRuka
Zvakare, ruvoko rwerudyi harusi nhengo yemuviri waMwari. Chiratidzo chesimba. Mweya hauna nhengo dzemuviri. Mwari Mweya uye haana chimiro chatioona, saka haana ruvoko rwerudyi runoonekwa. Asi Baba vanorarama vanoshandisa muviri waJesu kuti vaonese simba ravo.
ISAYA 42:13 JEHOVA achabuda semhare achamutsa kushingaira somunhu wokurwa,
Hakunomunhu, kare kana zvino, anokwanisa kukwikwidzana nesimba raJesu anoziviswa naRuka seMunhu akarurama.
Bhuku 43: Evhangeri raJohane
Hakuna muponesi anogara kana kumira parutivi paMwari kana kuti padyo naMwari.
I JOHANE 4:12 Hakunomunhu wakambovona Mwari.
Hakunomunhu anokwanisa kutaura kuti akavona Mwari amire parutivi paJesu nekuti hakuna akabvira akambovona Mweya waMwari usingavonekwe.
JOHANE 8:24 nokuti kana musinganditendi kuti ndini iye, muchafira muzvivi zvenyu.
JOHANE 8:58 Abrahama asati avapo ini ndiripo.
“Ndichava Iye” zvinotsanangura nzira yakashandiswa naMwari kuzvizivisa kuna Mosesi.
EXODO 3:14 Mwari akati kuna Mosesi, NDICHAVA IYE WANDICHAVA. Akati, Unoti kuvana vaIsraeri NDICHAVA ndiye akandituma kwamuri.
JOHANE 10:33 Uye nokuti iwe uri munhu unozviita Mwari.
JOHANE 14:10 Asi Baba, vanogara mandiri, ndivo vanoita mabasa avo.
Muviri weMunhu Jesu wakasikwa, chikamu ichocho hachisi Mwari. Waive Mweya waMwari wairarama Maari wakamuita Mwari. Mweya waive mukati nemuviri zvikabatanidzwa zvinoita Munhu mumwe.
Bhuku 44: Mabasa avapositora
Evhangeri remaBhuku mana rinomira sevarindi vakapoteredza Bhuku raMabasa. Aya ndiwo Mabasa eMweya Mutsvene Wairarama muvadzidzi vaJesu.
ISAYA 44:6 Zvanzi naJEHOVA, Mwari wavaIsraeri, noMudzikinuri wavo, JEHOVA wehondo, Ndini wokutanga nowokupedzisira; kunze kwangu hakuna Mwari.
Reuben, munyori mukuru wechiCatholic, anoratidza Jesu, anova Mwari, parutivi paJehova Mwari muTiriniti.
Isaya anoti mufananidzo uyu wakatadzikwa. Hakuna umwe Mwari kunze kwaJehova Mwari.
Sauro, munzira yake kuenda Damasiko, akaona chiratidzo chaJesu chakamupenyera.
MABASA 9:5 Iye akati, Ndimi aniko Ishe? Akati: Ndini Jesu waunotambudza;
MuJuda wekuTestamente Yekare akaita saSauro aikwanisa kudaidza Jehova chete kuti Ishe.
Saka Jehova wekuTestamente Yekare ndiye Jesu wekuTestamente Itsva.
MATEO 28:19 Endai naizvozvo, mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba nero Mwanakomana neroMweya Mutsvene.
Aitarisira kuti vadzidzi vatidzidzise Zita raBaba, reMwanakomana neroMweya Mutsvene nekuti izvi zvinzvimbo zvitatu.
Saka iyi ndiyo nzira yatakadzidziswa nayo naPetro kuti titeerere mirayiro yaJesu.
MABASA 2:38 Petro akati kwavari: Tendevukai mumwe nomumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi mupiwe chipiwa choMweya Mutsvene.
Bhuku raMabasa avapositora rakatanga kereke yekutanga apo vadzidzi vaiziva kuti Jesu ndiye Mwari wemasimba ose.
Mukati menguva yekutambudzika kukuru maporofita maviri Mosesi naEria vachaunza maJuda kuzaruriro yekuti Jesu ndiye Mwari wemasimba ose.
ZVAKAZARURWA 15:3 Vakaimba rwuyo rwaMosesi, muranda waMwari, norwiyo rweGwaiana, vachiti: Ishe Mwari wamasimba ose, mabasa enyu akakura, anoshamisa; Mambo wamarudzi nzira dzenyu dzakarurama ndedzezvokwadi, Imwi Ishe wavatsvene.
4 Ndiyaniko ungarega kutya nokukudza zita renyu, Ishe? Nokuti Imi moga muri Mutsvene:
Mosesi munguva yeKutambudzika kukuru, anoti Gwaiana ndiShe Mwari wemasimba ose uye Iye oga ndiye Mutsvene. Izvi zvinobvisa Baba neMweya Mutsvene kana vari Vanhu vakasiyana.
Saka maporofita maviri vanoparidza dzidziso yekuzara kwovuMwari kuti Jesu oga ndiye Ishe Mwari wemasimba ose. MaKristu ese akaponeswa vasingatendi izvi vachazvidzidza kubva kumaporofita maviri aya munguva yeKutambudzika kukuru. Izvi zvinoreva kuti kana muchitenda kuTiriniti muchave muri munguva yeKutambudzika kukuru kuitira kuti mudzidze kuzara kwevuMwari zvakanakisa.
Zvino kereke inofanira kubuda kunotendeutsa nyika, Mwari vanovayambira pamusoro pemuvengi wavo mukuru: Roma.
Chekutanga madzimambo ehushe hweRoma vaizouraya maKristu 3 miriyoni.
MaPope eRoma ekereke yeRoman Catholic vaizouraya vanhu vaipikisa chiCatholic vanosvika 68 miriyoni.
Madzimambo eRoma vakatora chinzvimbo chaPontiff chakaita kuti mambo ega ega ave muPrista mukuru wezvakavanzika zveBabironi. Zvino Pope weRoma akabva azotorawo chinzvimbo chaPontiff. Saka kereke yeRoman Catholic yaizova yakan'oreswa nezvitendero uye tsika dzekuBabironi. Kereke yeRoma inova mai vemakereke yaizoparidzira pfungwa iyi kuvanasikana vayo vemasangano akabuda mairi.
Bhuku 45: VaRoma
MaRoma ndivo vaive vavengi vekare vekereke yekutanga. Pauro anoyambira pamusoro pevamwari vavo vechipegani.
ISAYA 45:21 … Hakuna mumwe Mwari kunze kwangu, Mwari akarurama noMuponesi, hakuna mumwe kunze kwangu.
Hakuna mumwe Muponesi akagara parutivi paMwari.
Mwari, achigara mumuviri waJesu, ndiye Muponesi.
VAROMA 1:25 vakanamata nokushumira chisikwa kupfuvura musiki
VeRoman Catholic vanoti Petro akakwidziridzwa kuitwa muchengeti wemusuwo anokubvumirai kupinda Denga. Vanhu parizvino vanobatira Pope nekuti vanofunga kuti mumiririri waPetro.
MaCatholic vanotenda kuti Petro anovavhurira masuwo kuti vapinde Denga. Pope anotenda kuti Petro anokwanisa kukusiyai muchipinda Denga chete kana muchiteerera Pope.
VAROMA 2:11 Nokuti Mwari haatendi zvinovonekwa zvomunhu.
Hakuna Pope kana Kadhinari muBhaibheri. Mwari haasimudziri vanhu.
VaRoma 10:17 Naizvozvo kutenda kunovuya nokunzwa, nokunzwa kunovuya neshoko raMwari
VaRoma 14:23 zvose zvisingabvi pakutenda zvivi.
Chero chinhu chakasiyana nezviri muBhaibheri chakaipa. Pope, Kadhinari, Archibhishopu, masangano makurusa zvese hazvisi muMagwaro saka zvakaipa.
Bhuku 46: Bhuku rekutanga ravaKorinte
Vakorinte iBhuku regadziriso rekuswatanudza kutenda kwedu.
Pauro ari kuedza kuita kuti maKristu agare pachinhu chekuti Jesu ndiye Mwari wemasimba ose.
ISAYA 46:5 Muchandifananidza, nokundienzanisa, nokunditi ndakaita sani, wandingafanana naye?
Kuzara kwevuMwari muna Mwari weTiriniti kunotungamirira maKristu mukunotadza kweuchenjeri hwemaGiriki. Vanhu vatatu vakasiyana mukuzara kwevuMwari vakaenzana vose. Vatatu mumumwe. Mumwe muvatatu. Hakuna mavhesi eBhaibheri anotaura izvi!
I VaKorinte 15:47 Munhu wechipiri ndiIshe akabva kudenga.
I VaKorinte 2:8 nokuti dai vaibwuziva, vangadai vaisarovera Ishe wokubwinga pamuchinjikwa
Mwari aive kupi pakafa Jesu? Aive mukati maJesu.
VaRoma 5:10 Nokuti zvatakayananiswa naMwari nokufa kwoMwanakomana wake, tichiri vavengi vake,
II VaKorinte 5:19 Ndiko kuti Mwari wakanga achiyananisa nyika naye munaKristu
Pauro akaedzawo kuswatanudza rimwe dambudziko guru remaKristu rekuparadzana vachiita masangano akasiyana siyana ane mazita akasiyana siyana. Uyu wakazova mweya wemasangano vakazozvidaidza kuti maCahtolic, maLutheran, maAnglican nevamwe vakawandisa.
1 VaKorinte 1:11 kuti kune gakava pakati penyu.
12 mumwe nomumwe wenyu unoti ini ndiri waPauro, ini waAporo, ini waKefasi, ini waKristu.
Kupatsanurana kwezvikwata zvemasangano uku kunobereka kutadza kukuru kunova hutungamiriri hwevanhu mumakereke. Vatungamiriri vekereke vakasiyana siyana vanoita mitemo yavo nezvitendero zvisina kunyorwa muBhaibheri.
Izwi rekuti “mufundisi” (pastor) rakataurwa kamwe chete muTestamente Itsva.
ISAYA 46:6 Ivo vanodurura ndarama pahombodo, nokuyera sirivha nechiyero, vanoripira mupfuri wendarama iye ndokuita Mwari nayo, zvino vopfugama, nokunamata.
MuTestamente Yekare zvinhu zvakagadzirwa nevanhu zvainamatwa. MuTestamente Itsva mirayiro yakaitwa nevanhu yakava dzidziso dzaizofanira kutendwa kuitira kuti vanhu vanamate Mwari.
Masangano akasiyana ane dzidziso dzawo dzakasiyana uye nzira dzekunamata nadzo dzisina kunyorwa muBhaibheri. ChiKristu chakaparadzana kufanana nezvigunwe zvekumakumbo zviri pamufananidzo waDanieri apo vanhu vakasiyana vanouya nemazano akasiyana asiri muBhaibheri.
Bhuku 47: Bhuku Rechipiri RaVaKorinte
Kutadza kwakachenjera kuri mumasangano kunotinyengera.
Kereke yeRoman Catholic yakatora zvakavanzika zveBabironi ikava sangano rekutanga.
ISAYA 47:1 Buruka, ugare muguruva, iwe mhandara mukunda weBabironi;
Vese veMasangano vakabuda muCatholic mai vemakereke. Pakutanga vaikoshesa kurarama maererano neMagwaro saka vaive vanasikana vakachena, mhandara. Asi mushungu dzavo dzekuti vavake vateveri, mari uye simba hazvina kutora nguva refu vemasangano vasati vava masangano anotevera mirayiro yakaitwa nevanhu nekutenda kuvanhu sezvinoitwa neCatholic.
II VaKorinte 6:14 Musasungwa zvisina kufanira pajoko pamwe chete navasingatendi;
II VaKorinte 6:17 Saka budai pakati pavo, muzviravure,
II VaKorinte 11:14 Nokuti naSatani vo, unozvishandura, achizviita somutumwa wechiedza.
Saka Dhiyabhorosi anokwanisa kugadzira dzidziso inoonekwa seyakanaka. Asi isingakwanisi kurondwa ichiwanikwa muMagwaro.
Uye haana basa neMagwaro anorwisa kutenda kwake.
II VaKorinte 13:1 Mumiromo yezvapupu zviviri kana zvitatu mashoko ese achasimbiswa.
Munofanira kukwanisa kutsigira kutenda kwenyu nezvakanyorwa munzvimbo dzakasiyana siyana muBhaibheri, kwete kuvimba nekungoturikira mavhesi.
Mukadzi anomiririra kereke. Makereke paanobva paMagwaro, saka vakadzi vechiKristu vanobva vapfekwa nemweya wekuzvikurura vachiratidza makumbo avo vopfeka marokwe mapfupi.
ISAYA 47:2 …. kurura rokwe rako, fukura gumbo rako ....
3 Kusafuka kwako kuchava pachena, kunyadzwa kwako kuchavonekwa;
II VaKorinte 11:3 Senyoka yakanyengera Eva namano ayo
Eva, mukadzi, anomiririra kereke. Pauro anotiyambira kuti kereke iri nyore kunyengerwa nenyoka inomiririra Satani.
Bhuku 48: VaGaratia.
MaKristu anowana ruponeso pakarepo ozvisanganisa muzvitendero zvisinganzwisisiki zvisina kunyorwa muBhaibheri.
VaGaratia 1: 6 … kuti munokurumidza mukadai kushandurika... kuti mutsaukire kune imwe evhangeri
Kutadza kunotangira pakarepo mushure mekuponeswa. Nhanho yekutanga mumashure mekuwana ruponeso kubhabhatidzwa.
Pauro akaenda Efeso kwaainoita nheyo dzemakereke manomwe, sezvo aive ndiye mutumwa kukereke paEfeso. Pauro akabhabhatidza vanhu nenzira iyi;
Mabasa avapositora 19:5 Vakati vazvinzwa izvozvo, vakabhabhatidzwa muzita raShe Jesu.
VaGaratia 1:9 Kana kunomunhu unokuparidzirai imwe Evhangeri, inopesana naiyo yamakagamuchira, ngaave wakatukwa.
ISAYA 48:1 Inzwai izvi, imi imba yaJakobo makatumidzwa zita raIsraeri, makabuda mumvura zhinji, yaJuda; imi, munopika nezita raJEHOVA, muchirumbidza Mwari waIsraeri, musingazviiti nechokwadi kana nokururama.
Hazvina kunaka kukakavadzana naPauro. Rubhabhatidzo chikamu cheEvangeri. Asi hakuna vari kuita rubhabhatidzo nenzira yakataurwa naPauro. SevaGaratia, tinokasika kubviswa kubva parubhabhatidzo rwevapositora.
Tinotaura Zita raMwari, asi kwete muchokwadi. Nekuda kwei?
Hatisisina Zita raMwari nekuti tinoriviga mumazita ezvinzvimbo zvitatu: Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene.
Mune “vanhu” vatatu muTiriniti asi vaviri voga ndivo vane maZita.
Zvichibva paTiriniti, Mwari Baba ndivo vanodaidzwa kuti Jehova. Mwari Mwanakomana ndiye Jesu. Mwari Mweya Mutsvene haana Zita riri muBhaibheri.
Mazita maviri pavanhu vatatu vakaenzana haana kurudziro iri nani pakutenda kwedu.
Parizvino edzai kubuda nezita rimwechete revanhu vatatu ava vese. Izvi hazvigoneke.
Saka maKristu vakanganwa zita raMwari wavo zviri nyore.
Mapisarema 44:20 Kana tichinge takaganwa zita raMwari wedu, kana kutambanudzira mavoko edu kuna Mwari wavamwe;
Sekutaura kwemaKristu akaputirwa nechivutsi achiti, “muzita raBaba, reMwanakomana neroMweya Mutsvene” asi vanozokanganwa kutaura Zita racho chairo.
Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene zvingori zvinzvimbo. Zvichitorwa zvakaparadzana kana kuti zviri pamwechete. Hazvifi zvakaita Zita .
Saka Mwari weMaKristu ave kuita seasina zita.
MaKristu akakwereta vuMwari hweTiririniti kubva kuBabironi. Izvi zvinopa maKristu kuti Mwari wavo ave mutorwa chaiye.
Zita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene ndiyani?
Pauro akapindura mubvunzo uyu kupfurikidza kubhabhatidza Muzita raShe Jesu.
Saka Ishe Jesu Kristu ndiro Zita raMwari remunhu.
VaGaratia vaivewo nemamwe matambudziko.
VaGaratia 4: 9 – 10 modzokerazve seko kune zvokuvamba zvisine simba, muchidazve kutanga kuva varanda vazvo? Munochengeta misi nemwedzi, nenguva ….
MaKristu ari muhusungwa sezvo vachifanira kuchengetedza nguva yeKisimusi musi wa 25 mwedzi waZvita.
“Kisimusi” izwi risiri muMagwaro pazuva risimo muMagwaro, rakatevedzerwa kubva kunamwari wezuva wemapegani.
Zvinoshamisa here kuti musi wekisimusi usina kunyorwa muMagwaro ndiwo unotariswa uye kukosheswa nemunhu wese?
ISAYA 48:20 Ibvai paBabironi, tizai kuvaKaradia
Ibvai zvachose mukutadza kwemasangano kwakaunzwa neRoman Catholic kubva kuzvakavanzika zveBabironi zvaive munyika yeKaradia. Isita egi redu rakatevedzerwa kubva kuIshtar egi rekuBabironi. Mwari wavo Ishitar akatsotsonywa akabuda muzai raive murwizi rweEuphrati.
Mbiri yake yakapararira kusvika kure. Mufananidzo unotevera ndewemaonerwo anoitwa nemaHindu Ishtar egi wekuBabironi.
Pauro akaburitsa pachena kuti maKristu anonyengerwa zviri nyore uye vanoda kugadziriswa zvakanyanya. Tinotarisana nemuvengi ane simba muRoma akasanganiswa nemano ezvitendero zveBabironi uye uchenjeri hwemaGiriki. Isu maKristu tinofanirwa kungwarira zvakanyanya. Kuita kwedu parizvino kwekuti takanaka uye hatidi gadziriso kwakagara pakusaziva. Tinofanira kuzvideredza togara tichiziva kuti takatarisana nemuvengi akachenjera uye akaipisisa.
Muchikamu chinotevera Tichatarisa paNguva dzeMakereke manomwe toona kumwe kuparadza kwakaitwa naSatani pakereke mukati menguva idzi dzose.